Ilka Xanaf oo maanta Wareejiyay xilkii Guddoomiyaha Maxkamadda Sare – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( Mareeg)-Munaasabadaan oo ahayd mid xil wareejin ah ayaa waxa ay ka dhacday Magaalada Muqdisho iyadoo ay xilka ku kala wareegayeen Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee dalka Ceydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf iyo kan cusub Ibraahim Iidle Suleymaan.
Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare Mr Ilka Xanaf oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in intii uu xilka hayay wax badan uu ka qabtay Garsoorka islamarkaana uu garwaaqsan yahay dhaliilo loo jeedinayay shaqadiisa, taas oo uu ku micneeyay dhaqaalo yarida Garsoorka Soomaaliyeed uu ku shaqeynayay.
Dhinaciisa Guddoomiyaha Cusub ee Maxkamadda Sare Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa waxa uu sheegay in uu gudan doono waajibaadkiisa isagoo kaashanaya bahda Cadaaladda waxaana uu hoosta ka xariiqay in uu la shaqeyn doono dhammaan hay’adaha Cadaaladda dalka.
Sidoo kale Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilka Jiir oo ka hadlay munaasabadaasi xil wareejinta ayaa waxa uu u mahad celiyay Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare Ceydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf isagoo ku booray guddoomiyaha Cusub in uu si hufan u guto waajibaadkiisa shaqo.
4 May ee sanadkaan ayey ahayd markii Madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka xayuubiyay Guddoomiyihii Maxkamadda sare ee dalka Ceydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf kadib markii la sheegay in uu gaaray da’da howlgabnimada.